क्यु एफ एक्सको एड हो की फिल्मको पोष्टर ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
क्यु एफ एक्सको एड हो की फिल्मको पोष्टर ?
फिल्मी फण्डा । यहि मंरि २९ गतेबाट रिलिज हुन लागिएको फिल्म सुपर गोर्खेले एक पोष्टर सार्वजनिक गरिएको छ । फिल्मको प्रचार सामाग्री स्वरुप पोष्टर सार्वजनिक गरिएको हो । तर उक्त पोष्टर हेर्दा झट्ट मल्टिप्लेक्स हल क्यु एफ एक्स को विज्ञापन जस्तो भान हुन्छ ।
क्यु एफ एक्स मा फिल्मका शो शुचारु गर्नु पूर्व मोबाईल अफ गर्नको लागि एउटा एनिमेशन विज्ञापन बज्छ । जहाँ द गुड, द ब्याड, द ईडियट र द अग्ली जस्ता कार्टुन म्यानहरु देखाउँछ । उस्तै कपि गरेर फिल्म सुपर गोर्खेले आफ्नो पोष्टर सार्वजनिक गरिएको हो ।
पोस्टरमा गुड, व्याड र अग्ली म्यानहरुलाई प्रस्तुत गरिएको छ । चलचित्रकी निर्मात्री तथा नायिका ऋचा सिंह ठकुरी भने पोस्टरमा छैनन् । फिल्मलाई राज थापाले निर्देशन गरेका हुन् । अबिर हाउस प्रोडक्सनको ब्यानरमा बनेको हो ।
फिल्ममा तारा प्रकाश लिम्बुुको सङ्गीत, सौरभ लामाको छायाङ्कन रहेको छ । ऋचाको अलवा सुरजसिंह ठकुरी, निराज लुईंटेल, भुपेन्द्र खत्री, सचिन केसी लगायतको कलाकारहरूको अभिनय फिल्ममा रहेको छ ।